Posted by Tranquillus | Jan 6, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Sida caadiga ah, qaddarka lagu meeleeyo qorshahaaga keydinta shaqaalaha waxaa la sii deyn karaa oo keliya ugu yaraan 5 sano kadib. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood kuu oggolaanaysa inaad goor hore la baxdo dhammaan ama qayb ka mid ah hantidaada. Guurka, dhalashada, furiinka, rabshadaha qoyska, howlgabnimada, naafonimada, iibsiga hantida, dayactirka hoyga weyn, deyn badan, iwm. Sababta aad doonto ha noqotee, waa inaad sameysaa codsi sii deyn ah. Kala soo bax qodobkan dhammaan qodobbada aad ku xasuusato hawshan.
Goorma ayaad furi kartaa qorshahaaga keydinta shaqaalaha?
Sida ku xusan xeerarka jira, waa inaad sugto muddo sharci 5 sano ah si aad awood ugu yeelatid inaad hantidaada kala baxdo. Tani waxay khuseysaa PEE iyo kaqeybgalka mushaaraadka. Sidoo kale waa suurtogal inaad la baxdo keydkaaga isla markiiba, haddii ay tahay PER ama PERCO.
Sidaa darteed, haddii xaalad degdeg ahi kaa rabto. Waad bilaabi kartaa nidaam aad ku furayso keydkaaga shaqaalaha xitaa ka hor muddada lagu heshiiyey. Xaaladdan oo kale, waa sii deyn hore ama dib u bixin hore. Tan awgeed, waa inaad hase yeeshe leedahay sabab macquul ah. Ha ka waaban inaad sameyso cilmi baaris si aad u hubiso waxa sababaha loo arko inay sharci u yihiin codsigan noocan ah.
Talooyin wax ku ool ah
Marka ugu horreysa, waxaa muhiim ah in si sax ah loo go'aamiyo kiiska sii-daynta hore ee adiga kugu saabsan. Iyo sidoo kale baqshadda ay ku dabaqeyso: PEE, Perco ama PER. Kadib, waxaad ubaahantahay inaad bilowdo dalabkaaga siideynta hore si waafaqsan waqtiyada loo qabtay.
Ogow in fayl kasta uu gaar yahay. Sidaas darteed waa lama huraan inaad si fiican naftaada ugu sii sheegto xaaladaha kala duwan ee lagu soo rogay qandaraaskaaga. Ha iloobin inaad keento cunsur kasta oo cadeynaya sharcinimada dalabkaaga. Ku soo lifaaq hal ama dhowr dukumiinti sharci ah boostadaada. Kuu ogolaanayaa inaad dhigto dhammaan fursadaha dhinacaaga si aad u hesho heshiis sii-deyn hore ah. Xaalad kastaa waxay u baahan tahay caddayn sax ah: shahaadada guurka, buuga diiwaanka qoyska, shahaadada diidmada, shahaadada dhimashada, shahaadada joojinta qandaraaska, iwm.
READ Template warqad: codso lacag bixinta fasaxaaga aan la isticmaalin
Kahor intaadan dirin codsigaaga, hubi inaad hubiso inta aad rabto inaad sii deyso. Xaqiiqdii, xaq uma lihid inaad codsato lacag bixin labaad isla sababtaa awgeed. Xaaladdan oo kale, waa inaad sugto illaa inta sanduuqaaga dib loo soo celin karo.
Waraaqaha codsi siideynta qorshayaasha keydinta shaqaalaha
Waa kuwan laba warqad tusaale ah oo aad u adeegsan karto furitaanka kaydkaaga mushahar bixinta.
Tusaalaha 1 ee codsi siideynta hore ee qorshayaasha keydka shaqaalaha
Lambarka faylka :
[Goobta], taariikhda [Taariikhda]
Warqad diiwaangashan oo leh aqoonsiga rasiidka
Ujeeddo: Codsi siideynta hore ee keydka shaqaalaha
Waxaan xirfadahayga ku dhejiyay adeegga shirkadeena tan iyo (taariikhda qorista) sida (nooca booskaaga).
Waxaan halkan ku soo gudbinayaa codsi ah in si dhakhso leh loo sii daayo keydkayga shaqaalaha. Qandaraaskaygu wuxuu ka diiwaan gashan yahay tixraacyada soo socda: cinwaanka, tirada iyo nooca qandaraaska (PEE, PERCO…). Waxaan jeclaan lahaa inaan la noqdo (qeyb ama dhammaan) hantideyda, taasi waa (qaddar).
Xaqiiqdii (si kooban u sharax sababta aad u codsatay). Waxaan kuu soo dirayaa lifaaq (cinwaanka caddeyntaada) si aad u taageerto codsigeyga.
Aniga oo sugaya jawaab aan filayo in aan adiga kaa helo, fadlan aqbal, Marwo, muujinta salaanteyda xushmadda leh.
Tusaalaha 2 ee codsi siideynta hore ee qorshayaasha keydka shaqaalaha
Ujeeddo: Warqadda sii-deynta hore ee ka-qaybgalka shaqaalaha
Shaqaale ilaa (taariikhda shaqaalaynta) ee shirkaddaada sida (booska lagu qabto), waxaan ka faa'iideystaa qorshaha keydka shaqaalaha ee aan jeclaan lahaa inaan sii daayo (si buuxda ama qayb ahaan).
Xaqiiqdii (sharax sababaha kugu riixaya inaad soo gudbiso codsigaaga xayiraadda: guurka, abuurista ganacsiga, dhibaatooyinka caafimaad, iwm.). Si aan u caddeeyo codsigeyga, waxaan kuu soo dirayaa adoo ah lifaaq (cinwaanka dukumintiga taageeraya).
Waxaan halkaan ka codsanayaa in laga sii daayo (qaddarka) hantideyda (ha iloobin inaad cadeyso nooca qorshaha keydintaada).
Adoo rajeynaya heshiis deg deg ah oo dhankaaga ah, aqbal, Mudane, muujinta salaanteyda ugu fiican.
Qaar ka mid ah tilmaamaha qorista warqadda codsiga
Kani waa warqad rasmi ah oo loogu talagalay in lagu sii daayo qayb ama dhammaan kaqeybgalka shaqaalahaaga koontadaada keydka. Nuxurka warqaddu waa inuu noqdaa mid sax ah oo toos ah.
READ U daa bilow bilowga ganacsiga, warqad codsi bilaash ah
Iskusoo wada duuboo, hubi in dukumiintiyadaada taageeraya ay cusbooneysiinayaan si aad u rajeyso jawaab celin togan. Sidoo kale tilmaam jagada aad ka hayso shirkadda dhexdeeda oo cadee tixraaca shaqaalahaaga haddii aad mid leedahay.
Marka ay warqaddaadu diyaar noqoto. Waxaad ugu diri kartaa boostada diiwaangashan oo leh qirasho rasiidh toos ah hay'adda maamusha keydkaaga. Xarumaha qaarkood, waxaa jira foomam codsi furid ah oo lagala soo baxayo barxadda internetka qaab PDF ah.
Ogsoonow sidoo kale in codsigaaga lagu soo gudbiyo 6 bilood gudahood laga bilaabo taariikhda dhacdada taas oo ogolaaneysa sii deynta.
Waqtiga xaddidan ee lagu furayo wadarta
Waa inaad ogaataa in wareejinta qaddarka la codsaday aan isla markiiba la samayn doonin. Waxay kuxirantahay dhowr qodob, sida ereyga codsiga, waqtiga keenista warqada, iwm.
Xilliga sii deynta sidoo kale waxay kuxirantahay inta jeer ee qiimeynta lacagaha ee qorshahaaga keydinta lagu maal galiyay. Xisaabinta qiimaha hantida saafiga ah ee sanduuqa wadajirka ah ee shirkadda waxaa lagu sameyn karaa maalin, usbuuc, bil, rubuc ama simistar. Xaaladaha badankood, xilligan waa maalinle, taas oo suurtagal ka dhigaysa in lagu sii daayo wadarta muddo gaaban.
Marka la aqbalo codsigaaga furitaanka, koontadaada bangiga waa in lagu xisaabiyaa 5 maalmood oo shaqo gudahood.
Download "Tusaale-1-si-hore-sii-daayo-codsi-shaqaale-keyd ah.docx"	Tusaale-1-hor-u-sii-deyn-codsi-shaqaale-keyd ah.docx - Waa la soo dejiyey 2853 jeer - 15 Kb
Download "Tusaale-2-si-hore-sii-daayo-codsi-shaqaale-keyd ah.docx"	Tusaale-2-hor-u-sii-deyn-codsi-shaqaale-keyd ah.docx - Waa la soo dejiyey 2790 jeer - 15 Kb
READ Saxeexa emailka xirfadlaha ah
Template warqad: furid keydka shaqaalahaaga Janaayo 8th, 2022Tranquillus
horeLiistada qaaska ah ee Excel 2010
socdaTemplate warqad si ay u aqbalaan ama u diidin dheelitirka ka xisaab kasta
U dir iimayl kormeerahaaga: waa maxay qaacidada edeb leh ee aad isticmaalayso?
Dooro qaacidooyin asluub ​​leh oo isku dara ballan iyo xirfad